Hi-Fi on Apple Music, iMac 24 "iyo waxbadan. Todobaadka ugu wanaagsan waxaan ka imid Mac | Waxaan ka imid Mac
Hi-Fi on Apple Music, iMac 24 ″ iyo in ka badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Toddobaadkan dhammaadkiisa si dhakhso leh ayuu ula socday Imaatinka iMac-24-inch cusub, Apple TV 4K iyo iPad Pro laga bilaabo 2021 mulkiilayaashooda xaqa ah. Iibsashada isticmaaleyaashan ayaa la sameeyay waqti hore ka hor iyo jimcihii la soo dhaafay waxay bilaabeen inay gaaraan gacmahooda.
Marka lagu daro warkan ku saabsan soo dhaweynta alaabooyinka cusub toddobaadkan Maajo aad ayaa loo dhaqaajiyay, oo leh nooc beta cusub, iyo warar kale oo aad u fiican Waxaan wadaagi doonaa Axadan dhamaantiin waxaan ka imid Mac.
Waxaan ku bilaabaynaa mid ka mid ah wararka sidoo kale kiciyay badan ee shabakada toddobaadkan imaatinka Apple Music tayada Codka Hi-Fi ee ku habboon Dolby Atmos iyada oo aan kharash dheeraad ah ku jirin dadka isticmaala. Mar dhow qof walba wuu heli karaa.
Xanta kala duwan ayaa soo jeedinaysa taas MacBook Pro oo leh shaashad yar-LED ah lama soo bandhigi doono illaa sanadka dambe. Waa run in ilaha qaarkood ay muujinayaan inaan arki karno dhammaadka sanadkan laakiin kuwa kale ayaa jecel kiiskan Qalabka cusub ee soo-saarka ah ee loo yaqaan 'mini-LED bandhigay' ayaa la sheegay inuu imanayo sannadka 2022
Mar labaad waxaan rabnaa inaan kula wadaagno adiga 24-inch iMac unboxing ugu horeysay oo ay sameeyeen qaar aad caan u ah YouTubers. Dareenkan isticmaaleyaal badan ayaa horey u haysan doona iMac-kan cusub guriga ilaa Jimcihii la soo dhaafay, 21-kii May, waxay bilaabeen inay yimaadaan.
Bixin ku saabsan tusaalaha soo socda ee Apple Watch ayaa dhadhan fiican inooga tagaya afka. Xaaladdan oo kale maahan nooc ay abuurtay Apple oo ka fog, laakiin tan uu sameeyay Jon Prosser aad ayaan u jecel nahay. Ma jeclaan lahayd Apple Watch oo qaabkan leh? Waxaa macquul ah in Taxanaha cusub ee 7 uu ku dhammaado sidan ama wax la mid ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Hi-Fi on Apple Music, iMac 24 ″ iyo in ka badan. Toddobaadka ugu fiican ee aan ka imid Mac
Waxaad hadda ka iibsan kartaa Apple Watch Aurum-Edition 6.000 Euros